June 2017 – Thit San Khant
Facebook မှ Post များ (၁)
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖေနဲ့ ကျွန်တော် ခဏခဏ စကားများတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးတယ်…
အဖေက သူအလုပ်လုပ်လာတဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရုံးခန်းမရှိဘူး…
မနက် ၉ နာရီဆိုရင် ရန်ကင်းက တိုက်ခန်းမှာ သူ့တပည့်တွေအားလုံးနဲ့ ဆုံတယ်…
သူ့တပည့်တွေအားလုံးပေါင်းမှ ၅ ယောက် ၆ ယောက်ပဲ… အဲ့ဒီ့ထက် တစ်ခါမှ မပိုခဲ့ဘူး….
ဘယ်သူက ဘဏ်သွား… ဘယ်သူက သစ်တောရုံးသွား… ဘယ်သူက သစ်လုပ်ငန်းသွား… ဘယ်သူက ဆိပ်ကမ်း… ဘယ်သူက ဘယ်နေ့ နယ်မှာ သစ်သွားရွေးရမယ်… စသဖြင့် တာဝန် ဝေခြမ်းပေးလိုက်တယ်…
အားလုံးကို CDMA (ခြင်းဖုန်း) တစ်လုံးစီထည့်ပေးလိုက်တယ်…
သူ့တပည့်တွေကလည်း အဲ့ဒီ့ ခြင်းဖုန်းကို သေမလောက်ကြောက်တယ်…
ပြေးလို့မရဘူးလေ… လည်ပင်း ကြိုးကွင်းစွပ်ပေးလိုက်တာ… (ဟုတ်တယ်မလား မ Moe 😛 )
တစ်ခါတစ်လေ Driver နဲ့သွားတယ်…
အလုပ်များလို့ လူလိုတဲ့နေ့ဆို အဲ့ဒီ့ Driver (Driver ဆိုပေမယ့် အဖေအားကိုးရတဲ့ Manager လိုပါပဲ) ကိုပါ အလုပ်တာဝန်တစ်ခု သီးသန့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ သူ့ဘာသာသူ ကားမောင်းသွားတယ်…
သူ့ကားနောက်ခန်းမှာ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းကအစ… နေရာအမျိုးမျိုး အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် အဝတ်အစား အမျိုးမျိုး (မြန်မာဝတ်စုံ၊ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ၊ ဘောင်းဘီတို) အကုန်ထည့်ထားတယ်…
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ့တုန်းက ရှိလှ ၅ တန်း ၆ တန်းပေါ့…
မြန်မာကားတွေထဲမှာဆို ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဆိုတာ ….
Driver မောင်းတဲ့ကားကို နောက်ခန်းက မိန့်မိန့်ကြီးစီးပြီးရုံးလာ…
ရုံးရောက်ရင် တံခါးဖွင့်ပေးတဲ့သူနဲ့…. အိတ်ပြေးသယ်ပေးမယ့်သူနဲ့…
အတာချီကေ့ကြီးဆွဲပြီး ရုံးခန်းထဲဝင်… စုံလည်ထိုင်ခုံကြီးမှာ မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်…
ရုံးမှာ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ကိုယ့်စားပွဲနဲ့ ကိုယ် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာနဲ့ကိုယ်…
အဖေ့ကို အမြဲအပြစ်တင်တယ်… အဖေရာ Smart ကျကျနေစမ်းပါ… ဒီလိုကြီးနေတာ ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ် ဘာညာပေါ့…
အတုမြင် အတတ်သင် မြန်မာကားတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုခံရတဲ့ အချိန်ပေါ့…
အဖေကတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး ခပ်ပြုံးပြုံးပါပဲ…
သူက တစ်ခုတော့ အမြဲပြောတယ်… ငါ့ကားက ငါ့ရုံးခန်းပဲ… ကြိုက်တဲ့နေရာသွား… ကြိုက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းလို… ငါနဲ့မကွာအမြဲပါတယ်တဲ့…
မိဘဆိုတော့လည်း ပြန်မပြောသာတော့ ဒီလိုပဲ နေလာခဲ့လိုက်တယ်…
အခုကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အခါမှာတော့ သူဘာလို့ ရုံးခန်း မထားခဲ့လဲ ဆိုတာကို ကောင်းကောင်း နားလည် သဘောပေါက်လာတယ်…
ရုံးခန်းငှားရင် ရုံးခန်းငှားခတွေ တက်မယ်… မီတာခတွေ… ရေခတွေ… အခြားဗာဟီရတွေတက်မယ်…
ဝန်ထမ်းတွေ များရင် ဝန်ထမ်းစားရိတ်တွေ ထောင်းမယ်… စီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့ ပူရတာ တစ်ဘက်… ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လစာဆိုတဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ထမ်းရတာ တစ်ဘက်နဲ့ ပိုရုန်းရမယ်…
အဲ့လိုတွေ အပိုကုန်စရာများလာရင်.. ကိုယ်ရမယ့် အမြတ်ထဲက ပဲ့ပါမယ်…
အမြတ်ထဲက ပဲ့ပါရင် မိသားစုအထိနာမယ်…
လုံးဝကြီး ဒီလိုရုံးခန်းတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ မလိုဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး…
လုပ်ငန်းအကြီးကြီးတွေ လုပ်ရင်တော့ လိုတာပေါ့….
ခန်းညားတဲ့ ရုံးခန်းတွေ… များပြားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းလည်ပါတ်ဖို့ရော… အဟန့်အနေနဲ့ရော မဖြစ်မနေပေါ့…
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းလေးကဖြင့် ခပ်သေးသေး… အလုပ်ထက် ဟန်ကိုယ်ဖို့ ပိုများတယ်ဆိုရင် တော့ဖြင့်… ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာသလိုဖြစ်မှာပါ…
ဒီသဘောတရားတွေဟာ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပိုအားကောင်းလာတယ်…
အရင်က ဈေးရောင်းရင် ဆိုင်ဖွင့်ရတယ်…
အခု Online တွေက ရောင်းကြတယ်… ထိရောက်မှုခြင်းလည်း ကွာသလို… ကုန်ကျစားရိတ်လည်း အများကြီးကွာသွားတယ်…
ဆိုကြပါစို့ အရင် နာမည်ကြီး လှည်းတန်းက Go Show မှာ အင်္ကျီတစ်ထည် ဝယ်ချင်ရင်… Go Show ကို သွားရမယ်…
နယ်ကလူတွေဆို ရန်ကုန်ကို လူကြုံမှာရမယ်… ဒါမှမဟုတ် ရန်ကုန်ရောက်မှ ဝယ်ရမယ်…
ဘာပစ္စည်းတွေရှိလဲ သိချင်ရင်လည်း သိခွင့်မရ…
အခု Online Shopping တွေ ပေါ်လာတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး ကြိုက်တဲ့နေရာက ကြိုက်သလို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်တယ်…
ရောင်းတဲ့သူဘက်ကလည်း အိမ်မှာထိုင်ပြီး ရောင်းနေရုံပဲ… ဆိုင်ခန်းငှားခလည်း မကုန်ဘူး… ဝန်ထမ်းခလည်း မကုန်ဘူး…
အများဆုံးကုန်လှ Delivery လုပ်ပေးတဲ့သူခနဲ့…. ပစ္စည်းလွှဲခပေါ့…
ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်…. စနစ်နဲ့အညီ လိုက်လျောညီထွေစွာ ကျင့်ကြံသင့်တယ်ဆိုတာလေးကို ပြောချင်တာပါ….
သံသရာ တစ်ပါတ်လည်တယ်ပဲ ဆိုဆို…
အခုဆို ဘယ်သွားသွား ကျွန်တော့် အလုပ်အိတ်ပါတယ်…
အိတ်ထဲမှာ Laptop, Charger, Hard Disk (အစုံ), Tablet, စာရွက်စာတမ်း အကုန်ထည့်ထားတယ်… လေးတာမှ နင့်နေတာပဲ…
လေးတယ်…. ဒါမှမဟုတ် ရှုပ်တယ်ဆိုပြီး တစ်ခုခု ချန်ထားခဲ့ဖို့ မစဉ်းစားလေနဲ့…
ချန်ထားခဲ့တဲ့နေ့ဟာ အဲ့ဒီ့ချန်ထားခဲ့တဲ့ ပစ္စည်း သေချာပေါက်လိုတဲ့နေ့ပဲ…
ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ …
အလုပ်စကားပြောလို့ရတယ်… Presentation လုပ်လို့ရတယ်…
တစ်ခါထဲ Deal အပြတ်ဖြတ်လို့ရတယ်…
အဖေ့လို ငါ့ကားက ငါ့ရုံးခန်းလို့မပြောနိုင်သေးပေမယ့်…
ငါ့လက်ဆွဲအိတ်ဟာ ငါ့ရုံးခန်းလို့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ တွေ့တဲ့သူတိုင်းကို ကျွန်တော် ပြောဖြစ်တတ်ခဲ့ပြီလေ…
Post By : Pyiet Oo Aung
A Blind Girl and Her Love (မြန်မာပြန်)
မျက်မမြင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မျက်မမြင်ဘဝဖြစ်လာရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မုန်းတီးနေမိသလို အခြားသူတွေကိုလည်း မုန်းနေခဲ့တယ်.. သူ့ချစ်သူ ကောင်လေးတော့ သူမုန်းတဲ့ထဲမှာ မပါဘူးပေါ့..
ကောင်လေးဟာ မျက်မမြင်ကောင်မလေးဆီ နေ့တိုင်းလာပြီး အားပေးစကားတွေပြော၊ ဝေယျာဝိစ္စလေးတွေလုပ် နဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေးချစ်သူဘဝဟာ သာယာကြည်နူးစရာအပြည့်နဲ့..
” ဟင်.. မောင်.. ပြောလေ.. ”
” မောင်လေ… မေနဲ့ လက်ထပ်ပြီး. မေ ဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်.. ဖြစ်ချင်တာ အကုန်လုံး ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးမယ်.. မေ ဘာဖြစ်ချင်လဲပြောလေ.. ”
” မေ့ကို လက်မထပ်ချင်ပါနဲ့ မောင်ရယ်… မေက မျက်စိလည်း မမြင်ဘူး.. မောင့်ကိုတော့ အသည်းနစ်အောင်ချစ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မျက်မမြင်မလေး တစ်ယောက်ကို မောင် လက်မထပ်စေချင်ဘူး ”
” သြော်.. မေရယ်.. မေသာ လက်ထပ်မယ်ဆို မောင် ဘာပဲဖြစ်နေ ဖြစ်နေ အကုန် စိတ်တိုင်းကျဖြစ်စေရမယ်. နှော်.. လက်ထပ်ပါရစေ ချစ်လေးရယ် ”
” အင်း.. အဲဒါဆို.. မေလေ.. ကမ္ဘာကြီးကို မေ့မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ရတဲ့နေ့ကျရင် မောင့်ကို ချက်ချင်း လက်ထပ်မယ်သိလား ”
အဲလိုနဲ့ ကောင်လေးနဲ့ မျက်မမြင်မိန်းကလေးတို့ ကြည်နူးစရာ ချစ်စကားဆိုကြပြီး ၄/၅ ရက်လောက် မျက်မမြင်မိန်းကလေးဆီ ရောက်မလာတော့ဘူး…
မျက်မမြင်မိန်းကလေးကတော့ ” သြော်.. ယောင်္ကျားတွေများ ရက်စက်လိုက်တာ.. မျက်မမြင်မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘယ်တော့မှ မျက်စိမြင်လာစရာလည်းမရှိတော့ဘူး၊ မျက်စိမမြင်ရင် သူ့ကို လက်မထပ်ဘူး ဆိုတာလဲသိရော.. ပေါ်ကို မလာတော့ဘူး.. ရက်စက်လိုက်တာ မောင်ရယ်.. မေက မောင့်ကို အသည်းနစ်အောင်ချစ်တာပါ.. မေသာ မျက်စိမြင်ရပြီး မောင်သာ မျက်မမြင်ဖြစ်နေလည်း မေကတော့ ချစ်နေမှာပါ.. ” ဆိုပြီး ကြေကွဲနေရှာတယ်..
” ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်…. ” တံခါးခေါက်သံ.. ဘယ်သူများပါလိမ့်..
” ဘယ်သူလဲရှင့် ” မျက်မမြင်ကောင်မလေးဟာ ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ တံခါးသွားဖွင့်လိုက်တယ်..
” ကျွန်တော်တို့ မျက်စိအထူးကု ဆေးရုံကပါ.. မိန်းကလေးကို မျက်စိအလှူရှင်ပေါ်လာလို့ လာခေါ်တာပါ ”
” ဟုတ်လား.. ဝမ်းသာလိုက်တာရှင်.. ကျွန်မ မျက်စိမြင်တော့မှာပေါ့နှော်.. မောင်ရေ… မေသာ မျက်စိမြင်ရလို့ကတော့ မောင့်ကို မတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီး ချက်ချင်းလက်ထပ်ပါမယ်… ”
ဒီလိုနဲ့ မျက်စိအထူးကုဆေးရုံမှာ မိန်းကလေးကို မျက်စိအစားထိုးကုသပြီး ပတ်တီးဖြည်တဲ့နေ့…
ဆရာဝန်က ” ပတ်တီးဖြည်မယ်နှော်.. မိန်းကလေး မျက်စိ ပြန်ကောင်းလာရင် ပထမဆုံး ဘာလုပ်မှာလဲ… ”
” ကျွန်မလေ.. ကျွန်မ ချစ်သူဆီ ချက်ချင်းသွားပြီး လက်ထပ်မယ်.. ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် မိဘတွေကို လိုက်ကန်တော့မယ်.. ”
” ကောင်းလိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဗျာ.. ကဲ.. ဖြည်ပြီ…” ဆိုပြီး ပတ်တီးဖြည်လိုက်ပါတယ်.. မိန်းကလေးဟာ အံ့သြမှုတွေနဲ့ အပြည့်ပေါ့.. မျက်စိပြန်မြင်ရပြီ.. ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေက သူ့ကို ပြုံးပြီး ကြည့်နေကြတယ်…
မိန်းကလေးဟာ ချက်ချင်း ဆေးရုံပေါ်ကနေ ပြေးဆင်းလာခဲ့ပြီး ကားတစ်စီးငှားပြီး ချစ်သူကောင်လေးအိမ်ကို လိုက်သွားခဲ့တယ်… ချစ်သူကောင်လေးရဲ့ အိမ်လိပ်စာကို သိနေခဲ့ပေမယ့် ကောင်လေးအိမ်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးပါဘူး.. သူ့ကောင်လေး အသံကိုပဲကြားဖူးပြီး ကောင်လေးကိုလည်း တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး…
” သူ့အိမ်ရောက်ရင်တော့ တံခါးခေါက်မယ်.. ပြီးရင် မောင်ရေ မေလာပြီ လို့ အော်ပြီး မလွတ်တမ်းဖက်ထားမယ် “.. ကားပေါ်မှာ မိန်းကလေး စိတ်ကူးလေးယဉ်နေတုန်း.
” အစ်မပြောတဲ့ လိပ်စာနဲ့အိမ်ဟာ ဒီအိမ်ဗျ.. ရောက်ပါပြီခင်ဗျာ.. ”
မိန်းကလေးလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်းလှမ်းလာပြီး တံခါးကို ခေါက်လိုက်တယ်..
” ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် … ”
” ဘယ်သူလဲခင်ဗျာ… ”
ဒါ မောင့်အသံ.. လုံးဝမှတ်မိတယ်.. ဘယ်ဘဝ ရောက်ရောက် ဘယ်တော့မှ မေ့မသွားနိုင်တဲ့အသံ..
” မောင်ရေ.. မေလေ.. မေ.. မေ မျက်စိမြင်ရပြီသိလား… ”
” ဝမ်းသာလိုက်တာမေရေ… တံခါးဖွင့်ဝင်ခဲ့လေ… ”
” မေ.. ဘယ်တော့မှ ခွဲမသွားဘူးနှော်… ကဲ .. အခု မေ. မျက်စိမြင်ရပြီဆိုတော့ မောင့်ကို လက်ထပ်မှာမဟုတ်လား ”
ပြောရင်း ချစ်သူကောင်လေးဟာ မိန်းကလေးဘက်ကို ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့ လျှောက်လာလိုက်တယ်…
ချစ်သူ ကောင်လေးကို မြင်လိုက်ချိန်မှာ မိန်းကလေးဟာ မှင်သက်ဆွံ့အသွားခဲ့တယ်… သူ့ချစ်သူကောင်းလေးလည်း သူ့လိုပဲ မျက်မမြင်လေးပါလား…
” ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း.. လက်မထပ်ဘူး.. မျက်မမြင်ဘဝဖြစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် မုန်းတာ.. ရှင့်လို မျက်မမြင်ကိုလည်း ကျွန်မ လက်မထပ်နိုင်ဘူး… ” ဆိုပြီး ပြေးထွက်သွားတယ်..
ကောင်လေးဟာ တံခါးဝမှာရပ်ရင်း မိန်းကလေး ထွက်သွားတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဘက်ကို လှည့်ပြီး ကြေကြေကွဲကွဲနဲ့တီးတိုးပြောလိုက်တယ်..
” မောင့်ကို လက်မထပ်ရင်တောင် မောင့်မျက်လုံးလေးတွေကို ဂရုစိုက်ပါ ချစ်ရေ.. ”
A Blind Girl and Her Love ကို မြန်မာမှုပြုထားပါသည်။
Bloody Reunion (2006) Movie Review
ကျနော် ကိုယ်တိုင် ဒီဇတ်လမ်းအစကို အင်မတန် ရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်
နားမလည်တော့ဘူး မကြည့်ချင်တော့ဘူး ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာပါဘူး နက်နဲ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ လျို့ဝှတ်ချက်တွေကို
မသိချင်ပဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ပြီး အသက်ရှုရပ်မတန့် ဆက်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့
Korea ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဇတ်လမ်းပုံစံကတော့ ကျောင်းဆရာမဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ဆရာမပတ်ခ် ဟာ
အသက်ကြီးပြီး နာမကျန်းဖြစ်နေလို့ သူမ တပည့်ဖြစ်သူ နမ်မီဂျား မှ
ဆရာမ ရောဂါက ပိုမိုပြင်းထန်လာတဲ့ အခါ နမ်မီဂျား မှ ဆရာမ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့
တပည့်တစ်ချို့ကို ဆရာမ နေထိုင်ရာ ဆီသို့ ဆုံတွေ့ကြရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတော့တယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တပည့်များ နှင့် ပျော်ရွှင်စွာ တွေ့ဆုံရင်း ငယ်ငယ်က အဖြစ်အပျက်များကို
ပြန်ပြောင်းအောင်းမေ့ရင်း ဆရာမပတ်ခ် စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာမ တပည့် ထဲက တစ်ချို့တော့ ရောက်လာကြပါတယ်
ဂျောင်ဝူး ၊ မြောင်ဟို ၊ ဆန်ဟီး ၊ ဒယ်ဗြောင် ၊ စီဟို ၊ အန်ယောင်း တို့ ဖြစ်ပြီး
သူတို့ လာရင်း ကိစ္စတွေမှာ လျို့ဝှတ်ချက် ကိုယ်စီ ပါလာကြပါတယ်
ဘယ်လိုပဲ သူတို့ ရောက်လာလာ ဆရာမ ပတ်ခ် ကတော့ တပည့်တွေကို
သို့ပေမယ့် ထို ပျော်ရွှင်ခြင်းက နောက်နေ့ မကူးခင်မှာပဲ
ထို ဆရာမပတ်ခ် နှင့် တပည့်တွေ အပေါ် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး
ရက်စက်မှုများ ကျရောက်လာတော့မယ့် အခါမှာတော့။
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ ထိတ်လန့်သည်းဖို သွေးထွက်သံယိုတွေ ပါတဲ့
ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီး အသဲငယ်တဲ့ သူတွေ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ
IMDb 6.1/10 ထိ ရရှိထားပြီး Horror အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ Min Pyae Sone ဖြစ်ပြီး Channel
Myanmar ကနေ မြန်မာစာတန်းထိုး နှင့် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Lost & Found (2016) Movie Review
Adventure အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကြိုက်သူတွေ အတွက် သင့်တော်တဲ့ရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်ပါတယ်
အန်ဒီ ဟာ ကျောင်းမှာ ရေကူးအားကစား မှာ ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး
စိတ်ဓါတ်ကျခိုက် အပေါင်းအသင်းမှားကာ စတိုးဆိုင်တစ်ခုကနေ ပစ္စည်းခိုးယူ၍
ရဲတိုင်ခံခဲ့ရပါတယ် ထို့နောက် ၀န်ခံကတိလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရပြီး အန်ဒီ ဖခင် မှ
အန်ဒီ ဦးလေး ဖြစ်သူ ထရန့်ဝေါ်တန် ရှိသော ကျွန်းတစ်ခုသို့ အန်ဒီ ၏ ညီ မိုက်ခ် နှင့်
အတူ အလည်အပတ် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်…
ထို ကျွန်းသို့ ရောက်သော အခါ ဝေါ်တန် မျိုးရိုးသည် ချမ်းသာခဲ့ပြီး
လူယုတ်မာများ လက်ချက်ဖြင့် အန်ဒီ တို့ အဖိုး ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး မိသားစုပိုင်
ပစ္စည်းများ အစ ပျောက်သွားသည်ကို သိရှိရကာ ဝေါ်တန် တို့ရဲ့ အမွေ အနှစ်ကို
ပြန်လည်ရှာဖွေ ရန် အဖိုးဖြစ်သူ ထားခဲ့သော ၀ှက်စာများမှ တဆင့် အစ ဖော်ရာ
တွေ့ရှိဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပြီး အန်ဒီ တို့ အဖိုး အစပျောက်အောင် ဖန်တီးပြီး ပစ္စည်းများကို
တိတ်တိတ်လေး ရှာဖွေ နေသူမှာ အန်ဒီ ၏ ရည်းစား ကလဲရာ ရဲ့ အဖေ
ဘရိုမန်း ဖြစ်နေသည်ကို သိရှိခဲ့ကြသော် အခါ….
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ IMDb 5.3/10 ရရှိထားပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇတ်လမ်းဆင်ထားပါသည်
www.channelmyanmar.org တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Pudding Monsters (Android & iOS) Game Review
Android & iOS Game ဆော့ရတာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူတွေ အတွက် Game ကောင်းလေး တစ်ခု နဲ့
ကျနော့်လို Mobile Game ဆော့ရတာ အင်မတန်ပျင်းတဲ့ သူတောင် ဆော့ရတာ ပျော်တဲ့
ဂိမ်းကတော့ Pudding Monsters လို့ ခေါ်တဲ့ Android Mobile Game ဖြစ်ပါတယ်။
Game ပုံစံကတော့ Jelly Pudding လေးတွေဟာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှ အစားမခံရအောင်
အိပ်ပျော်နေတဲ့ တစ်ခြား Jelly Pudding တွေ နဲ့ ပြန်လည်စုစည်းပြီး လွတ်မြောက်အောင်
အတားအစီးလေးတွေ ကြားကနေ Pudding တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက လက်လေးတွေနဲ့ ရွေ့ပြီး
ပေါင်းစည်းပေးရမှာ ဖြစ်သလို သူပြထားပေးတဲ့ Star လေးတွေ နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ခဲ့ရင်3Star
အထိ ရရှိမှာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
125 levels အများကြီးပါတော့ ဆော့ရတာ မရိုးပဲ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့
Puzzle Game အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ် Game ကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Developer ကတော့
Cut The Rope လို Puzzle Game တွေ နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ ZeptoLab ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Game ကို ဆော့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google Account (or) Apple ID
ရှိရမှာဖြစ်ပြီး မိမိ ဖုန်းက App Store (or)Play Store App မှ
တဆင့် ၀င်ရောက် ရှာဖွေ Download ဆွဲ ၍ ဆော့နိုင်ပါတယ်
အကယ်၍ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် အောက်ပါ Link ကို နှိပ်၍ Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
Download IOS —-> https://goo.gl/D32dsG
Download Android —-> https://goo.gl/84NnC8
Resident Evil: Vendetta (2017) Review
Wow… လို့ အရင်ပြောပါရစေ…
Resident Evil: The Final Chapter နဲ့ ဂျင်းသိပ်ခံရတာတွေ
ဒီ Animation Movie နဲ့ ပြန်ဖြေသိမ့်လိုက်ရတယ်…
IMDb 7.1/10 ထိရထားတယ် ဆိုရင် သိလိုက်တော့…
ကိုယ်တွေ လွမ်းနေတဲ့ ခရစ် ပါမယ် ရေဗက္ကာ ပါမယ် လီယွန် ပါတယ်
ဇတ်လမ်းက နည်းနည်းတော့ Game ဆန်မယ် ကိုယ်တွေက
Game အဆော့များလို့လား မပြောတက်ပေမယ့် Game Story နဲ့
နဲနဲသွားဆင်နေတယ် သိပ်မကြာသေးခင်က ထွက်ရှိထားတဲ့
Resident Evil 7: Biohazard (Game) လိုမျိုး ဇတ်လမ်း ကြိုမသိနိုင်တဲ့
ပုံစံမျိုး နဲ့ ဇတ်သိမ်းသွားတယ်…
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ရမယ်ရှာပြီး ဆွဲဆန့်ထားတဲ့ Resident Evil
ဇတ်လမ်းတွေဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ချာလာပေမယ့်
ခုနောက်ပိုင်း Japan က Game နဲ့ Animation တွေဟာ ဖန်တရာတေနေတဲ့
umbrella corporation ကို တစ်ဖြေးဖြေး ကျနော်တို့ဆီကနေ အစဖျောက်
အရင်က umbrella ရဲ့ ဖော်မြူလာက တစ်ဦး ကနေ တစ်ဦး ကိုက်ပြီး
သတ်ဖြတ်ပြီး ကူးမယ် အသိဥာဏ်မဲ့ပြီး သွေးနံ့ရသမျှ ကိုက်မယ် ဆိုတာတွေ
အခု ဗီလိန် အသစ် အေရိစ် ရဲ့ လက်ထပ် မှာ တစ်မျိုးပြောင်းလဲလိုက်ပါပြီ
သူကမှ တကယ့်စစ်တပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်နိုင်ပါတယ်…
အေရိစ် ဟာ ဗိုင်းရပ်စ် ဖော်မြူလာ ကို ထပ်ပြီး ဆန်းသစ်ကာ
Zombie တွေကို ထိန်းချူပ်နိုင်တဲ့ ဖော်မြူလာ အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်..
အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ တကယ့် Zombie တပ်ဖွဲ့ကို ဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တာပါ….
ဇတ်လမ်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ အမြည်းအဖြစ် မပေးနိုင်တာကိုတော့
ခွင့်လွှတ်ပေးပါ ကျနော့် လက် နဲ့ ရေးမပြနိုင်ချင်လောက်အောင်
ကျနော့် ရဲ့ ၀ါသနာတူ Resident Evil Fan တွေကို ခံစားစေချင်လို့
Resident Evil အားလုံးကို မလွတ်တမ်း ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့
Channel Myanmar Translator Tariq L Walker ကနေ
မြန်မာစာတန်းထိုး နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ
ပြီးရင် ကျနော် ညွှန်းထားသလို ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပေါ့…
စာရေး ဆရာများ နှင့် သူတို့၏ ၀တ္တုများ
မလွတ်အောင် ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း ရောက်အောင်ရေးရတာလည်းး
ဥပမာ အနေနဲ့ဆရာမ မစန္ဒာရေးတဲ့
ဘဝအိပ်မက် ပန်းအိပ်မက် ဝတ္ထုဟာ
ဆရာကြီးသိန်းဖေမြင့်ရေးတဲ့ အရှေ့ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာကတော့ အထင်ကရအဖြစ်ဆုံးပါပဲ
အဲ့စာအုပ်ဖတ်ရင်းးနဲ့ ကိုယ်ပါ အရေးတော်ပုံတွေ
ဥပမာ ဆရာမကြီး ခင်နှင်းယုရဲ့
ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာရဲ့ မေ
ဆရာကြီး မြသန်းတင့်ရဲ့ မာယာဘုံ
စတဲ့ စတဲ့ ရှားပါးဝတ္ထုတွေလည်းပါတဲ့
ဝတ္ထုပေါင်း တစ်ရာကျော် ပြန်ထုတ်ထားပါတယ်
ကိုယ်လည်း တစ်ချို့ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ရပါဦးမယ်
ကိုယ် ဝတ္ထုရေးတဲ့စာရေးဆရာတော်တော်များများကို ချစ်ပါတယ် လေးလည်းလေးစားတယ်
သုတရော ရသပါ ရေးသားဖန်တီးနိုင်တဲ့
ဆရာတွေကို ဝေဖန်တာ နည်းနည်းများးး
Author – Nant Hay Mar Lwin